Qeerroon Bilisummaa Oromoo Harka Qullaa Waraana Wayyaannee Injifate Eessa Jira? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooQeerroon Bilisummaa Oromoo Harka Qullaa Waraana Wayyaannee Injifate Eessa Jira?
Damee Boruu: 07/22/2019
OPDOn qaama EPRDF mucaa guddisaa TPLF turte. TPLF duraa deemee kan ilmaan Ormoo fixaa fi ficiisaa ture OPDO dha. Waraaqsi bilisummaa Uummata Oromoo kan OPDO akkeekatu malee kan OPDO itti hirkatu qabu hin ture. Qabsoon Bilisummaa Uummata Oromoo karaa irraa butamee(hijacked tahee) jira.Qabsoon bilisummaa Saba Oromoo dorrrobee dhufe gatatee jira. Sababni maal akka tahe utuu hin hubatiin hiikaa isaa arguun laafaa hin tahu.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo harka qullaa waraana Wayyaanee daccee Oromiyaa irraa buqqisuuf milka’ejira. Garuu maaliif injifannoon kun harka OPDO galuu danda’e e? gaaffiin jedhu deebii gahaa argachuu qaba. Erga OPDOn aangoo dhuunfatee as Qeerroo fi Qarreen Oromoo maaliif taa’ee ilaaluu filate? Dhuguma ijoolleen Abbaa Gadaa masaraa Miniliki seente dhaadannoon jedhu dhaloota qubee akkas onnoomee jiru bishaan qabanaa itti facaasee onnee isaanii bishaan godhe immoo? durumaanuu damqinsi siyaasaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo sadarkaa guddina aangoo qabachuu irra hin geenye?
Aangoo biyya bulchuu qabachuuf caasaan ijaarsaa fi jabeenyi siyaasaa biyya bulchuu danda’u jiraachuun Barbaachisaa dha. Bara darbe yaroon qabsoon bilisummaa Uummata Oromoo Waraana Wayyaanee of irraa darbu ABO fi WBO bakka har’a jiran kana waan hin turrreef biyyaa bulchuuf Qeerroon BIlisummaa Oromoo OPDO itti hirkachuu malee filmaata biraa waan qabu hin fakkaatu.
Walii galla garuu uummatni Oromoo keessattuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhiga isaa itti dhangalaasee, qaama isaa itti hirisee, lafee isaa itti caccabsee biyya Waraana Wayyaanee harka bilisa baasee OPDOn amma lafaa raabisuun, maalaqa hiruu fi dantaa taayyitaan dabbalootaa fi kittillayoota kumaatamaan horatee qabsoo Bisilummaa Oromoo ifatti balleessuuf agamatu maaliif yaroon kennameef? Har’a OPDOn dantaa fi mindaan namoota hedduu bitachuudhaan basaastotaa fi dabbaloota biyyaa fi biyya alaa keessa facaaftee jirti. Hojiin isaanii inni guddaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dogonoraa uumuu dha. Namoota nagaaf yaadu fakkaatanii ABO fi WBO balaallefatu. Mootummaa Kononeel Abiyiif yaroon akka kennamuuf gaafatu. Biyya keessaa fi alatti hiriira Mootummaa OPDO gargaaru qindeesaa jiru. Biyya keessatti Shannee balaallefanna kan jedhu hiriiraa oofaa turan. Garuu walaallummaa isaanii kan agarsiisu ijaarsi Shanee jedhu Uummata Oromoo keessa akka hin jirre adda baafachuu dhabuu dha.
Waraaqsi keenya kan akeekatee ka’e sirna EPRDF buqqisuu ture. OPDOn kan qaama EPRDF turte baduun hafe abbaa aangoo taatee ijifanaan as bahuun kan nu qaanessuu qabu. Qabeenya Oromiyaa samamee fi dhiiga ilmaan Oromoo waggaa 27f dhangalaa’aa tureef kan duraan dursee itti gaafatamuu qabu OPDO tahee utuu jiru OPDOn badhaasa aangoo argachuun baayyee kan nama qaannessuu dha. Seenaa uummata Oromoo keessatti kun madaa fayyuu hin dandeenye dhiigaan barreefamee dhaloota boruuf kan darbuu qabu dha.
Waan hunda caalaa baayyee kan nama gadsiisu har’a hidhaa, ajjeechaa fi gidiraan uummata Oromoo bara Wayyaanee ol jabaatee jira. Isa darbe irraa barachuu dhiiftee OPDOn yakkaa fi badii hiriyyaa hin qabne Uummata Oromoo irratti raawwataa jirti. Yaroof itti haa fakkaatu malee Mootummaan kami iyyuu hidhaa fi ajjechaan biyyaa bulchuu hin danda’u.
Utuu hidhaa fi ajjeechaan kan biyyaa bulchu tahee mootummaan bara baraan jiraachuu qabu Mootummaa Dargii ture. Mootummaan Dargii walii galla Uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa dhaloota tokko fixxee jira. Garuu aangoo irra baayyee turuu hin dandeenye. Jeequmsi Impaayeerri Itoophiyaa har’a keessa jirtu bara kufaatii Dargii wajjin baayyee wal fakkaata. Uummatni jumulaal buqqa’uun, mana wajjin gubachuun, saamamuun fi seeraa fi heera malee hedhamuufi ajjeefamuun kan bara Dargii wajjin tokko tahaa jira.
Mootummaan Dargii dhaloota tokko waan balleessee jiruuf haala Impaayeera Itophiyaa keessatti dhalachaa jiru kana hubatee akka biyyi sun gara sirna qabeessaa fi bulchina demookraasi akka ceetu humni gochuu danda’u jiddutti dhumee jira. OPDO yoo tahe Sabboonummaa qabaachuu miti namumaa iyyuu hin qabane dha. Ofii jiraachuu wixxifachuu malee waan biyyaa fi uummataaf tahu hojjechuuf ganama iyyuu manaa hin baane. Namootni mootummaaf dabballee tahan warra uummata biratti tafattaman, warra gadi aantumman itti dhaga’amu fi jibamoo akka tahan bara dargii irraa kaafnee kaan hubachaa turre dha. Akkuma uummatni isaan jibbu isaan illee uummata jibbu. Kanaafuu gara laafina tokko malee uummata irratti yakkaa hiriyyaa hin qabne hojjetu.
Keessattu namoota beekumsa qabanii fi warra uummatni jaallatu hidhuu fi ajjeessuu ergama isaanii keessa isa duraa taha. Beekkumsa gahaa waan hin qabnee ummata itti dubbatnii qabachuuf waan rakkoo qabaniif waan hundaa qawwee fi humnaan hiikuuf carraaqu. Yaroof haa sodataman malee karaa yoo argatee uummtni isaan balleessuu irraa of duba akka hin jenne hin galuuf. Gaaffii mirgaa uuammatni gaafatuf deebiin kennamu hidhaa fi rasaaaa tahuun jabina miti. Hojiin OPDO hunduu kan umurii OPDO gabaabsu akka tahe gaaffii hin qabu.
Ilmaan Abbaa Gadaa masaraa Miniliki seenan oduun jedhu kijiba. Kan masaraa Miniliki seene diqaalota Habashaa qofa. Maqaa OPDOn kan Mootummaa EPRDF hooganaa dhuunfatee jiru diqaalota Habashaa akka tahan kana duras kaafnee jirra. Mootummaa kana qajeelchma hojii(road map) fuula 27 baase kan kenneef ilmaan nafxanyootaa fi harcaatota Dargii akka tahe afaan Andargach TSigee irraa dhiyeenya kana Atilaantaatti dubatee dhageenyee jirra. OPDOn ABO waan hundaa duraa akka balleessuu qabdu kan gorsaa jiru warra farra Uummata Oromoo tahan ilmaan nafxanyootaa fi harcaatota Mootummaa Dargii akka tahan nuyis hin daganne.
Obbo Leencoo Lataa fi Dr. Dimaa Nogoo amma dhiyyeenya kana ODF ijaaratanii saaxila of baasan ABO bukkoksaan qabuun akka guddatee Uummata Oromoo bilisa hin baafnee hammeenya warra diina Oromoo jennu ol raawwataa turan. Akkuma kana maqaa OPDOn har’a Diqaaltonni Habashaa uummata Oromoo irratti yakkaa guddaa raawwachaa jiru. Guyyan isaan saaxilmanis fagoo hin jiru.
Naannoo hundaa keessatti mormtoonni fi mootummaan naannoo wal tahanii yaroo fedhii uummata isaanii guutuuf tattaafatan agarra. Kan garaagrumma jiru dhiphisee mormtoota wajjin hojjechuu irra waraana filatee jiru OPDO duwwaa akka tahe waan ifatti argamu. OPDOn yakka waggaa 27 uummata keenya irratti hojjetaa turte xiqqaate har’a komandi postiin Oromiyaa bulchuuf yaaliin godhamu fudhatama hin qabu. OPDO fi Uummata Oromoo garaa fi dugda tahaa jira. Haa tahu malee Qeerroon Bilisummaa Oromoo Waraana Wayyaanee harka qullaa buyyaa baase har’a eessa jira? WBOn har’a qeerroo fi qarree kaleessa akka ture naaf gala. Garuu OPDOf shimalli waan gahu natti fakkaatee ture.
Great question, Damee Boruu!
The shadowy self-delusions of our people that the OPDO has renewed itself, and become a party representing the Oromo people, have been blown away, as the OPDO/ODP has chosen to do the opposite. Everyday of the Abiy adminstration is fed on the routine diet of the 19th century butcher, Minelik II, with a splash of neo-neftagna. Oromo fundamental questions are not only being ignored by OPDO cadres, but also being attacked and undermined at all opportunities in order to appease the anti-Oromo pseudo-Ethiopians, the neo-neftagna.
Other Oromo politicians and political organizations? Only heaven may know what they are up to. Qeerroo and qarree? I still hope that our bright youths have not abandoned their responsibilities to free their people, and gone to accompany mediocre Oromo political leaders in their deep sleep. Qeerroo and qarree, remember that you are the only hope of the great Oromo people, and the sky is not the limit to what you can achieve if you understand the immense potential of your people, and work hard in unison. Are you organized? Have you identified capable leaders from among yourselves and promoted them to lead you? Have you strengthened your unity, gained through your struggles for justice and freedom, and cemented by the blood of your fallen comrades? Are you able to “separate the wheat from the chaff”? Beware; “in politics, being deceived is no excuse”!